भारतबाट झण्डै १ करोड रुपैँया बोकेर आएका २ व्यक्ति नागढुङ्गाबाट प,क्रा,उ – Taja Khawar
भारतबाट झण्डै १ करोड रुपैँया बोकेर आएका २ व्यक्ति नागढुङ्गाबाट प,क्रा,उ
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन ०९, २०७८ समय: १३:२५:०३
स्रोत नखुलेको रु ९५ लाखसहित दुई जनालाई प्रहरीले प,क्रा,उ गरेको छ । नागढुङ्गास्थित महानगरीय प्रहरी प्रभागबाट खटिएको टोलीले सवारीसाधन जाँच गर्ने क्रममा गएराति उक्त रकमसहित भारतको महाराष्ट्र घर भएका २६ वर्षीय सागर माली र सोही ठाउँका १९ वर्षीय कृष्ण अढाडेलाई प,क्रा,उ गरेको हो ।
सागरका साथबाट रु ४५ लाख र कृष्णका साथबाट रु ५० लाख बरामद गरिएको काठमाडौँ महानगरीय प्रहरी परिसरले आज जारी गरेको विज्ञाप्तिमा जनाइएको छ ।
चितवनबाट काठमाडौँ आउदै गरेको ग१ख ६६४५ नम्बरका माइक्रोमा सवार उनीहरुले झोलामा उक्त रकम लुकाइछिपाइ ल्याएका थिए ।
उनीहरुले पैसाको स्रोत खुलाउन नसकेपछि प,क्रा,उ गरिएको घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले पार्टी सत्ता र राज्यसत्ता दुरुपयोग गरेर महाधिवेशन गर्नुभन्दा सीधै सभापति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएका छन् । केन्द्रीय निर्वाचन समिति पुलिस प्रशासन र गुन्डागर्दीमा पनि मूकदर्शक बनेको उनको आरोप छ ।
नेता केसीले भने, पार्टीको विधि, विधान र नियमलाई कुल्चेर सत्ता र शक्तिको स्रोत दुरुपयोग गरी जबर्जस्ती पार्टी कब्जा गर्ने खोज्नु दुःखद पक्ष हो । निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले निर्वाचन भए पो परिणाम स्वीकार्ने हो । बलजफ्ती गरेर हारेमा त्यसको तिक्तता लिएर पार्टी कहाँ पुग्छ ? महाधिवेशन भनेको विपक्षी दलसँगको प्रतिस्पर्धा होइन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो । यस्तो पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? यस्तो अधिवेशन गर्नुभन्दा सीधै सभापति घोषणा गरे भइहाल्यो नि ।”
नेता केसीले केन्द्रीय निर्वाचन समिति गलत क्रियाकलापको मतियार बनिरहेको आरोप लगाए । उनले थपे, “हुन त निर्वाचन समितिमा कानुनवेत्ता साथीहरु छन् । उनीहरुले न्यायिक निर्णय गर्नुपर्नेमा पदाधिकारीको आदेश तामेल गरिरहेका छन् । मूकदर्शक भएर बसिरहेका छन् । निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत हुन सकेको छैन । डडेलधुरालगायत १०–१२ जिल्लामा विभिन्न उजुरी परेका छन्, निर्णय भएको छैन । उनीहरुले न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने होइन ?”
पार्टीको संस्थापन पक्षले महाधिवेशन नचाहेको पनि उनले बताए । उनले भने, “हिमाली, पहाडी र मधेस अलअलग कार्यतालिका आएको छ । कार्यतालिका मनपरी दसौंचोटि संशोधन गरिएको छ । मिति सार्दै सार्दै महाधिवेशन नै नगर्ने तहमा पुर्याएका छन् । कुन दिन के नोटिस आउँछ, कसैलाई थाहा छैन । पूर्व पदाधिकारीका नाममा पार्टी विधानकै मौलिकतामा परिवर्तन गरिएको छ । यो केन्द्रीय कार्यसमिति राखेर छलफल गर्नुपर्ने होइन ?”
आज ६४ जिल्लामा हुने पालिका अधिवेशनमा स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले नेतृत्व चयन होस् भन्ने चाहेको उनले बताए । उनले भने, “अधिवेशनमा व्यक्तिगत स्वार्थ र संकीर्णता स्वस्थ संकेत होइन । महाधिवेशन भनेको नेतृत्व चयनमात्र नभएर सैद्धान्तिक छलफल गर्ने उत्सव पनि हो । कसले कसलाई हराउने, कसले कसलाई जिताउने खेलमा तल्लो स्तरमा गतिविधि भइरहेको छ । नुवाकोटको बेलकोटगढी वडा नं ४ मा माओवादीका ठूलो जमात नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको थियो । पार्टीभित्रको भेदभावका कारण ती साथीहरुले तिक्तता अनुभव गरेर पार्टी छाडे । अब मनपरी गरेर पार्टी चलाउनेलाई दण्डित गर्न सक्नुपर्छ ।”
निर्वाचनमा हारजित र मत विभाजन स्वाभाविक भए पनि मन विभाजन हुन दिनु नहुने उनले बताए । उनले महाधिवेशनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “देउवा अहिले पनि हाम्रो नेता हो । फेरि जितेपछि पनि हाम्रै नेता हुने हो । सकेसम्म हामी साझा उम्मेदवार उठौंला, नभए तीन चार जना लडौंला । आखिर जहाँबाट जसले जिते पनि कांग्रेसले नै जित्ने हो । प्रतिस्पर्धा, वादविवाद, वैचारिक मन्थन लोकतान्त्रिक पद्धति हो । यसलाई बिर्सेर जबर्जस्ती नेतृत्वमा पुग्ने कुरा कसैलाई सैह्य हुन्न ।”
Last Updated on: September 25th, 2021 at 1:25 pm